कार सेवा चेकलिस्ट - Victor Mochere
जब तपाईंको कार सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा चलिरहने कुरा आउँछ, यसलाई नियमित रूपमा सर्भिस गराउनु तपाईंले गर्न सक्नुहुने उत्तम कुराहरू मध्ये एक हो। तर सेवा प्राप्त गर्दा झन्झट जस्तो लाग्न सक्छ, विशेष गरी नयाँ ड्राइभरहरूका लागि जो कार स्वामित्वमा राम्ररी जान्दैनन्, यो हुनु आवश्यक छैन। हामीले कार सर्भिसिङको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुराको लागि एउटा गाइड राखेका छौं। कार सेवा भनेको तपाईको गाडीको नियमित मर्मतसम्भार सहितको स्वास्थ्य जाँच हो जसले तपाईको इन्जिनको तरल पदार्थको स्तरदेखि तपाईको कारको सामान्य लुगा र आँसुसम्म सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्दछ। सेवा सामान्यतया मेकानिकद्वारा गरिन्छ र ती मध्ये सबैभन्दा गहिराइमा लगभग 50 वा बढी प्रणाली र कम्पोनेन्ट जाँचहरू, समायोजनहरू र भागहरू प्रतिस्थापन समावेश हुन्छन्।
मलाई कार सेवा किन चाहिन्छ?
के एक कार सेवा सरकारी कार निरीक्षण जस्तै हो?
कार सेवा के समावेश छ?
मैले कुन प्रकारको सेवा रोज्नुपर्छ?
पूर्ण कार सेवाको लागत कति हुन्छ?
मलाई कति पटक कार सेवा चाहिन्छ?
के म मेरो आफ्नै कार सेवा गर्न सक्छु?
नियमित सर्भिसिङको अर्थ तपाईंको कार सकेसम्म कुशलतापूर्वक र सुरक्षित रूपमा चलिरहेको छ, र नियमित निर्धारित सर्भिसिङले लामो समयसम्म तपाईंको पैसा बचत गर्न सक्छ। नियमित सेवा प्राप्त गर्नाले तपाईले सुधारिएको इन्धन दक्षता, राम्रो ह्यान्डलिङ र सहज चलिरहेको इन्जिन, साथै तपाईको गाडी राम्रोसँग चलिरहेको छ भनी थाहा पाएर मनको शान्ति पाउनुहुनेछ। यसले तपाईंको कार घरमा वा सडक छेउमा बिग्रने सम्भावनालाई पनि कम गर्छ। यसले समयको साथमा समस्या निम्त्याउन सक्ने कुनै पनि समस्यालाई बडमा निप गरेर गम्भीर मर्मत बिलहरूबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ। पूर्ण सेवा इतिहासले तपाइँको कारको बजार मूल्य कायम राख्न मद्दत गर्दछ यदि तपाइँ बेच्न छनौट गर्नुहुन्छ। नियमित सवारी साधन सेवाले लगभग निश्चित रूपमा तपाईंको गाडीको आयु पनि विस्तार गर्नेछ।
होइन यो होइन। धेरै मोटरसाइकल चालकहरूले आफ्नो कार सर्भिस गराउनु आवश्यक छैन भनी सोच्छन् किनभने यो सरकारले भर्खरै आफ्नो कार निरीक्षण पास गरेको छ, तर वास्तवमा नियमित सेवा र सरकारी कार निरीक्षण फरक छन् र यो दुवै गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सरकारी कार निरीक्षण भनेको सवारीको सुरक्षा र वातावरणीय प्रभाव जाँच गर्ने वार्षिक निरीक्षण हो र देशको सडकमा लगभग हरेक सवारी साधनको लागि कानुनी आवश्यकता हो। यद्यपि, सरकारी कार निरीक्षणले सवारी साधनको सडकयोग्यता जाँच गर्दा, यसले त्यो भन्दा गहिरो खोजी गर्दैन। सेवाले तपाईंको कारका सबै कम्पोनेन्टहरू सकेसम्म सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको छ भनी सुनिश्चित गर्नेछ।
वास्तवमा तपाईको सेवामा के समावेश छ तपाईले कुन प्रकार रोज्नुहुन्छ भनेर धेरै हदसम्म निर्धारण गरिनेछ, तर पूर्ण सेवामा इन्जिन तेल र फिल्टर परिवर्तन समावेश हुनेछ; सबै तरल पदार्थहरूको जाँच र पूर्ण ब्रेक जाँच, साथै सामान्यतया सुरक्षा-सम्बन्धित सुविधाहरू सहित 50 भन्दा बढी अन्य मुख्य घटकहरूमा जाँच गर्दछ। थप गहिरो (र महँगो) सेवाले कम्पोनेन्टहरूको फराकिलो दायरा जाँच र प्रतिस्थापन गर्नेछ र स्पार्क प्लगहरू र विभिन्न महत्त्वपूर्ण फिल्टरहरूको परिवर्तन समावेश गर्न सक्छ, साथै पाङ्ग्रा पङ्क्तिबद्धता र निलम्बन जस्ता कारकहरू जाँच गर्दछ।
सेवा स्तर तपाईंको वार्षिक माइलेज बराबर हुनुपर्छ त्यसैले यो तपाईंको सवारी साधन प्रयोगको स्तरमा निर्भर गर्दछ।
जब तेल र फिल्टर प्रतिस्थापन आवश्यक छ
प्रत्येक6महिना वा 6,000 माइल (9,656 किमी) (जुन पहिले आउँछ)
प्रत्येक 12 महिना वा 12,000 माइल (19,312 किमी) (जुन पहिले आउँछ)
निर्माता सेवा तालिका अनुसार, जानकारीको लागि आफ्नो कार म्यानुअल जाँच गर्नुहोस्
पूर्ण सेवाको लागि $100 - $200 को बीचमा तिर्ने अपेक्षा गर्नुहोस् जसमा इन्जिन तेल र फिल्टर परिवर्तन समावेश हुनुपर्छ; सबै तरल पदार्थहरूको जाँच र पूर्ण ब्रेक जाँच, साथै सामान्यतया सुरक्षा-सम्बन्धित सुविधाहरू सहित 50 भन्दा बढी अन्य मुख्य घटकहरूमा जाँच गर्दछ।
धेरै निर्माताहरूले तपाइँको कारलाई वर्षमा कम्तिमा एक पटक, वा प्रत्येक 12,000 माइल (19,312 किमी), जुन पहिले आउँछ, तपाइँको कारलाई सेवाको लागि राख्न सिफारिस गर्छन्, तर यो तपाइँको कार र तपाइँको व्यक्तिगत ड्राइभिङ शैली मा निर्भर गर्दछ। केही सवारी साधनहरू अब उच्च गुणस्तरको लुब्रिकेन्टहरू प्रयोग गरेर सेवाहरू बीच विस्तारित माइलेजका साथ पनि सञ्चालन गर्छन्। यदि तपाइँ आफ्नो कार बेच्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, पूर्ण सेवा इतिहासले मूल्य थप्न सक्छ किनकि खरिदकर्ताहरू उनीहरूले के किनिरहेका छन् भन्नेमा बढी विश्वस्त हुनेछन्।
कारको स्वामित्व महँगो हुन सक्छ, र यदि वर्षमा एक वा दुई पटक सेवाको लागि भुक्तान गर्ने विचारले तपाईंको बैंक ब्यालेन्सलाई डरले भर्छ भने, तपाईंले आफ्नो कार आफैं सर्भिस गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। बोनट मुनि तपाईंसँग आत्मविश्वासको सभ्य स्तर हुन आवश्यक छ, र तपाईं आफैंले गर्नुहुन्छ वा मेकानिकलाई काम गर्नुहुन्छ, यो आवश्यक छ कि तपाईंको कारलाई सडकमा सुरक्षित राख्न र सडकमा अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि बारम्बार सेवा गरिन्छ। आफ्नो कार।
a के यो मेरो आफ्नै कार सेवा गर्न सजिलो छ?
यदि तपाइँसँग सभ्य प्राविधिक ज्ञान छ भने तपाइँ कसरी सही उपकरण र जानकारीको साथ आधारभूत कार सेवा पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यसो भनिएको छ, हामी तपाईंलाई आफ्नो सवारी साधनको सेवा गर्ने प्रयास गर्न सिफारिस गर्दैनौं जबसम्म तपाईं वास्तवमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन र तपाईंसँग सही उपकरण र उपकरणहरूमा पहुँच छ। यदि एक अनुभवहीन व्यक्तिले सवारी साधनको मर्मतसम्भारमा आफ्नो हात कोशिस गर्छ भने, गाडीका कम्पोनेन्टहरू भाँच्नेदेखि आफूलाई चोट पुर्याउनसम्म धेरै कुरा गल्ती हुन सक्छ।
b मेरो आफ्नै कार सेवा गर्न मलाई कुन उपकरणहरू चाहिन्छ?
जब यो तपाईंको आफ्नै कार सर्भिसिङको कुरा आउँछ, तपाईंले यसलाई सुरक्षित रूपमा गरिरहनुभएको सुनिश्चित गर्न तपाईंसँग सही उपकरण र उपकरणहरू हुनु आवश्यक छ अन्यथा तपाईंले आफ्नो कार, आफू र अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई जोखिममा पार्न सक्नुहुन्छ। साथै स्प्यानर र स्क्रू ड्राइभरहरूको आधारभूत सेट (र धेरै पुराना र्यागहरू), यी उपकरणहरूले समावेश गर्दछ:
सकेट सेट (स्पार्क प्लग हटाउन सकेट सहित)
कार ज्याक र एक्सल स्ट्यान्ड
तेल फिल्टर हटाउने
तेल नाली ट्रे (वा बाल्टिन)
यदि तपाईं आफ्नो कारको आधारभूत सेवा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यी कम्पोनेन्ट जाँचहरू हुन् जुन तपाईंले पूरा गर्न खोज्नुपर्छ:
1. तेल परिवर्तन
आफ्नो कार ज्याक अप गर्नुहोस्, आफ्नो इन्जिनमा सम्प प्लग अनस्क्रू गर्नुहोस्, तपाईंले तेलको क्याप हटाउनुभएको छ र प्रयोग गरिएको तेल सङ्कलन गर्न तल उपयुक्त ड्रेन ट्रे राख्नुभएको छ। अर्को, तेल फिल्टर रिमूभरको साथ तेल फिल्टर हटाउनुहोस् र सबै तेल बाहिर निस्कन पर्खनुहोस्। जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ, नयाँ तेल फिल्टरलाई एउटै स्थानमा राख्नुहोस्, रबरको सीललाई नयाँ तेलले हल्का रूपमा भिजाउनुहोस् र यसलाई बलियो सिल प्रदान गर्नुहोस्। पहिले सम्प प्लग वरिपरि वाशर बदल्न वा नवीकरण गर्न सम्झँदै, सम्प प्लगलाई रिफिट गर्नुहोस्।
अन्तमा, नयाँ तेलमा बिस्तारै खन्याउनको लागि फनेल प्रयोग गर्नुहोस्, डिपस्टिकलाई नियमित रूपमा जाँच गर्दै तपाईंले ओभरफिल नगर्नुहुनेछ। इन्जिनलाई 10 मिनेटको लागि चलाउनुहोस् तेल चलाउन अनुमति दिन, त्यसपछि तेल फिल्टर र सम्प प्लग चुहावट छैन भनेर सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस्। इन्जिन बन्द गरिसकेपछि र तेलको स्तर स्थिर हुन अनुमति दिएपछि, तेल अधिकतममा छ भनी सुनिश्चित गर्न डिपस्टिक प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै कार को सेवा गर्नुहुन्छ भने, क्रमबद्ध गर्न को लागी सबैभन्दा कठिन चीजहरु मध्ये एक प्रयोग गरिएको तेल हो। इन्जिन तेल प्रयोग पछि रिसाइकल गर्नुपर्छ र कुनै अन्य पदार्थ संग मिसाउनु हुँदैन।
2. टायरको दबाब / अवस्था
गलत टायर प्रेसरले कार्यसम्पादनमा हानि, टायर झर्ने, खराब सडक हस्तान्तरण र गाडीको अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सही दबाब हुनु आधारभूत सेवाको एक आवश्यक भाग हो। थप जानकारीको लागि हाम्रो टायर प्रेसर गाइड जाँच गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो टायरहरूको अवस्था पनि जाँच गर्नुपर्छ, तिनीहरू धेरै लगाएका छैनन् र ट्रेड डेप्थले कानुनी आवश्यकता पूरा गरेको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
3. कार तरल पदार्थ बदल्नुहोस्
इन्जिन आयल परिवर्तन गर्नुका साथै, आधारभूत सेवाले कारमा स्क्रिन वाश, ब्रेक फ्लुइड, इन्जिन कूलेन्ट र पावर स्टेयरिङ फ्लुइड लेभललगायत अन्य सबै तरल पदार्थको स्तर जाँच गर्नुपर्छ। यदि कुनै धेरै कम देखिन्छ भने, तिनीहरूलाई भर्नुहोस्। यसले तपाईंको एन्टी-फ्रिज एकाग्रता पनि जाँच गर्नेछ।
4. स्पार्क प्लगहरू बदल्नुहोस्
केही निर्माताहरूले स्पार्क प्लगहरू हरेक 30,000 माइल (48,280 किलोमिटर) प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गर्छन्, तर इन्जिनको प्रकार वा निर्माताको आधारमा अन्य सिफारिसहरू छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्, त्यसैले तपाईंको आफ्नै गाडीको लागि सेवा साहित्य हेर्नुहोस्। यदि तपाईंको कार सुरु गर्न संघर्ष गरिरहेको छ वा धेरै कम्पन हुन्छ भने, तपाईंलाई चाँडै नयाँ स्पार्क प्लगहरू आवश्यक पर्न सक्छ। प्लगहरू आफैं खोल्नु अघि पहिले HT लिडहरू हटाउनुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले क्षेत्र राम्ररी सफा गर्नुभयो। नयाँ प्लगहरू सकेटमा राख्नुहोस् र खाली ठाउँमा तल राख्नुहोस्, पहिले हातले कडा गर्नु अघि सही सेटिङमा टर्क रेन्चको साथ।
5. एयर फिल्टर बदल्नुहोस्
सामान्यतया तपाईले गर्न सक्ने सरल जाँचहरू मध्ये एक। केवल एयरबक्स अनक्लिप गर्नुहोस् र फोहोर एयर फिल्टर प्रकट गर्न यसलाई हटाउनुहोस्। प्रयोग गरिएको एयर फिल्टर हटाउनुहोस् र एयरबक्सलाई पुन: बन्धन गर्नु अघि नयाँ सफासँग बदल्नुहोस्।
विश्वमा २०२२ मा शीर्ष १० सबैभन्दा ठूलो कार्बन डाइअक्साइड (CO10) उत्सर्जन गर्नेहरू